Fikarohana momba ny firaisana Ny raharaha Reincarnation an'i Joseph McCarthy | Ted Cruz & Fiainana taloha tao amin'i Barack Obama, Mitt Romney, John Kerry, John McCain, Paul Ryan, Ronald Reagan & Jon Stewart - Fikarohana Reincarnation
Ny raharaha Reincarnation an'i Joseph McCarthy | Ted Cruz sy ny fiainana taloha an'i Barack Obama, Mitt Romney, John Kerry, John McCain, Paul Ryan, Ronald Reagan & Jon Stewart
Fihetsehana nasongadina tamin'ny: Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw
Ted Cruz manana ny politikan'ny Joseph McCarthy
Nisalasala aho tamin'ny famoahana ity tranga ity, satria somary saro-pady ihany izy, saingy maro ireo mpanohana ny ReincarnationResearch.com no nanoratra tamiko fa mihevitra ny Senatera Texas Ted Cruz dia ny fiverenan'ny vovoka indray ny Senatera Joseph McCarthy. Noho izany tombontsoa izany dia hizara ireto manaraka ireto aho.
Nijery mijery televiziona MSNBC ahitana mpampiantrano aho Chris Matthews tany am-piandohan'ny taona 2013 Andriamatoa Matthews dia nitatitra momba an'i Ted Cruz, izay nametra-panontaniana tamin'ny olom-boatendry Obama tamin'ny alàlan'ny fanamarihana, isaky ny fandinihan'i Chris. Nilaza i Chris fa nampiasa tetika nampiasain'i Joseph McCarthy i Cruz, izay nanjary nalaza noho ny fampiasàny teny manohitra ny liberalista tamin'ny fiampangana ireo olona ireo ho Kominista.
I Ted Cruz sy Joseph McCarthy dia manana fijery mitovy amin'izany
Nilaza i Chris Matthews fa tsy vitan'ny hoe mihetsika toy ny McCarthy i Cruz, fa nanamarika ihany koa izy fa misy fitoviana eo amin'i McCarthy sy Cruz. Chris Matthews dia nanao izao fanambarana manaraka izao, izay azo jerena amin'ny: Matthews ao amin'ny Cruz.
"Nampitahako tamin'i McCarthy izy," hoy i Matthews momba an'i Cruz. "Tsy tokony hiditra amin'ny endrik'olona aho, fa izy kosa dia mampahatsiahy ahy be dia be izy, rehefa mijery azy manadihady vavolombelona eo an-tampon'ny Hill aho dia toa an'i Joe McCarthy."
Ny fitoviana ara-batana amin'ny nofo iray manokana dia voafaritry ny maodelin'ny angovo fanahy, izay resahina ao Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano, ary ny fototarazo. Ny fitsarana ny anarany, Joe McCarthy dia azo inoana fa teratany irlandey, raha manana lova Latino i Ted Cruz. Raha teraka ho fianakaviana Aziatika na afrikana-amerikana ny fanahin'i Joe McCarthy, dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny endriny ara-batana sy ara-batana ny endriny.
Joseph McCarthy sy Ted Cruz dia manana tànana mitovy eo amin'ny tanana-manondro ny rantsan-tànana
Ny fandinihina fa mitovy amin'ny McCarthy an'i Cruz dia namely ny akorany ary voamarika koa fa samy McCarthy sy Cruz no naneho ny fahazarana manondro ny rantsan-tànana amin'ny endriny mba hanamafisana fanambarana.
Ny fikarohana momba ny vatana dia nahatsikaritra fa ny fihazakazahana dia afaka mifanaraka amin'ny fampidirana iray ao amin'ny iray hafa. Ohatra iray mampihetsi-po amin'ny hoe ahoana no ahafahana mitoetra amin'ny fiainana tsy tapaka mandritra ny androm-piainana dia ny raharaha an'i Peter van Mussenbrock | Steve Wozniak. Mussenbrock, eny an-dalana, dia mpahay siansa holandey izay niara-niasa tamin'i Ben Franklin tamin'ny fanandramana herinaratra (Steve Wozniak, mpiara-manorina an'i Apple, dia injeniera elektrônika). Ny Mussenbrock | Ny trangan'i Wozniak, miaraka amin'ny fampitahana amin'ny fihetsika tanana, dia hita ao amin'ny bokiko ateraka indray ary Fiverenan'ny revolisionera
Ankoatra an'i Chis Matthews mahita ny fifanoherana eo amin'i Cruz sy McCarthy, Rick Ungar, mpandray anjara amin'ny Forbes, dia nanoratra ity lahatsoratra manaraka ity: Ted Cruz-Ny famerenana amin'ny maty ao amin'i Jo McCarthy?
Ireo gazetiboky hafa izay nanasongadina lahatsoratra mitantara ny fitoviana misy eo amin'i Cruz sy McCarthy dia ahitana ny New York Times, Ny New Yorker, Ny Marietta Daily Journal, The National Review, ny Washington Post, Ny Dallas Morning News ary ny Huffington Post.
Nohamafisin'i Ted Cruz ho fampianaran'i Joseph McCarthy ao amin'ny vatana vaovao indray
Satria ny fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana dia mahita izany Ny olona dia afaka manana endrika mitovy fijery, toetra toetra ary talenta nandritra ny androm-piainany, Niahiahy aho fa i Ted Cruz dia mety ho ny fiverenana indray ara-bakiteny an'i Joseph McCarthy. Nandritra ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy fa i Ted Cruz no vatana vaovao indray vao niorina tamin'i Joseph McCarthy. Mba hahafantarako ny asa nataoko niaraka tamin'i Kevin sy Ahtun Re, mankanesa any: Fijangajangana ao amin'ny Reincarnation Ryerson-Semkiw
Ny fampielezan-kevitr'i Ted Cruz hamono an'i Obamacare, ny Filibuster ary ny Push hanakatonana ny governemanta federaly amerikana
Araka ny nomarihina, ny talenta koa dia avy amin'ny fampodiana iray mankany amin'ny iray hafa. Tena tian'ny Joseph McCarthy ny fahazoana ny fifantohan'ny media ary nampiasa io fahaiza-manao io izy teo amin'ny tsikombakomba tamin'ny Communisme. Manana fahaiza-manao tahaka izany koa i Ted Cruz.
Cruz dia nanao kabary marathon tao amin'ny kaongresy hamoahana an'i Obamacare, izy no feo nitarika ny fanidiana ny governemanta federaly tamin'ny volana oktobra 2013 ary raha ny loharanom-baovao avy ao amin'ny antokony, rehefa naneho fanoherana ny toe-tsaina fahirano ireo mpiara-miasa aminy repoblikana, hoy i Cruz nilaza fa zavatra iray izay nahatonga azy ho "Repoblikanina madio tokana." Azon'ny olona an-tsaina fa rehefa nanohitra ny fanadiovana kominista azy ny mpiara-miasa amin'ny Repoblikan'i Joseph McCarthy, dia azony atao ny mieritreritra an'i McCarthy milaza fa izy irery no tena Amerikana.
Paul Ryan amin'ny maha-Reincarnation an'ny talen'ny fampielezan-kevitra an'i Joseph McCarthy, Urban van Susteren
Ny mahaliana, noho ny fampielezan-kevitry ny prezida 2012, te-hanala ny androm-piainako ho an'i Mitt Romney aho Paul Ryan. Ahtun Re dia nanambara fa i Paul Ryan dia sakaizan'i Joe McCarthy ary mpanolotsaina momba ny fampielezan-kevitra politika ho an'i McCarthy izy. Taorian'ny fanadihadiana kely dia hitako fa ilay kandidà azo inoana dia Urban van Susteren, izay mitovy endrika amin'i Ryan. Taorian'izay dia nanamafy i Ahtun Re fa i Paul Ryan no teraka ao amin'ny vatana vaovao ao Urban van Susteren. Ny mahaliana, ny zanakavavin'i Urban van Susteren dia mpitsikera ara-politika Greta van Susteren.
Ny fiainan'i Barack Obama taloha, Mitt Romney sy John McCain
Teo aloha dia namoaka ny fiainany taloha ho an'i Mitt Romney i Ahtun Re, sy ny lasa ho lasa an'i Barack Obama, John McCain ary John Kerry. Ireo tranga ireo dia azo jerena amin'ny:
Alkoholisisma Joe McCarthy sy ny vokany ho an'i Ted Cruz
Ny fanahy dia teraka amin'ny fisiana ara-batana mitondra ny toetra voajanaharin'ny fanahy, izay mifandray amin'ny toetran'ny zavamananaina sy ny endriky ny vatany izay tafiditra ao anatiny. Joseph McCarthy dia noeritreretina ny ho faty ny fisotroan-toaka, ny fahoriana izay manana mpandray anjara avy amin'ny firaisana. Ireo fanahy izay mijaly amin'ny fisotroan-toaka mandritra ny androm-piainana iray dia miantoka matetika loatra fa tsy tafiditra ao anatin'ny fianakaviana miaraka amin'ny famaritana dika mitovy azy izy ireo, ka tsy averimberina ilay traikefa. Na dia mety ho nijaly tamin'io aretina io aza i Joseph McCarthy, dia tsy midika izany fa manana tolo-tena mitovy amin'ny an'i Ted Cruz ihany koa i Ted Cruz, satria samy manana ny lova ara-pananany izy.
Voalaza fa ny fanahy izay voan'ny aretina ara-panafody dia afaka manamboatra ny fahamasinana mba ho teraka amin'ny ray aman-dreny tsy manana lova mitovy. Raha te hianatra bebe kokoa momba ny fandrindrana ny fiainana ianao dia mandehana: Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano
Ronald Reagan ho fampisehoana indray ny Revolisionera Amerikanina Lotera Martin
Ohatra iray amin'ny hoe ahoana no ahafahan'ny fanahy hijaly amin'ny fisotroan-toaka mandritra ny androm-piainana iray fa tsy amin'ny iray hafa dia tafiditra ao amin'ny tranga vao teraka indray ao amin'ny vovoka zaza teraka ao Luther Martin | Ronald Reagan, izay asongadina ao amin'ny bokiko, Fiverenan'ny revolisionera. Ny tantaran'i Luther Martin, izay solontena iray tamin'ny Fifanarahana momba ny lalàm-panorenana, dia notantaraina tamina fomba tena mampiala voly, mahatsikaiky ary tsotra ao amin'ny bokin'i Kevin Bleyer, Me the People: Fikarohana tsy misy fitiavan-tena ataon'ny lehilahy iray hanoratana indray ny lalàm-panorenan'i Etazonia. Ao anatin'izany i Kevin dia mampiseho ny tena tian'ny Fivoriambe momba ny Lalàmpanorenana, fa tsy ny dikan-teny tena tsara izay aseho amin'ny lahatsoratra amin'ny ankapobeny.
Jon Stewart amin'ny maha-teraka indray an'i Henri Ward Beecher
Kevin Bleyer, eny an-dalana, dia mpanoratra Ny Daily Show miaraka amin'i Jon Stewart. Jon Stewart dia fantatra amin'ity tranonkala ity fa ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray an'i Henry Ward Beecher, izay minisitra kristiana malala-tanana tany New York City nandritra ny ady an-trano amerikana. Beecher dia noheverina ho iray amin'ireo lehilahy nanan-kery sy malaza indrindra tamin'ny androny, nefa izy koa dia "nopotehina", olona iray izay afaka nampihomehy ny hafa.
Beecher dia nanana mpanatrika manokana niaraka tamin'i Abraham Lincoln, satria nitady fanohanana ara-politika an'i Beecher i Lincoln.
Misy ny fitovozan-kevitra mampiavaka ny Beecher sy Stewart.
Mandeha: Tantaram-pinoana ho an'ny zafikelin'i Henri Ward Beecher | Jon Stewart
Jereo koa: Sarimihetsika sy fahitalavitra
Ny antokom-pinoana mahazatra eo amin'ny mpanao politika, ny minisitra ary ny mpilalao dia mahafinaritra ny mijery ny mason'ny vahoaka sy ny faniriana hanana fiantraikany amin'ny vondron'olona na fiarahamonina. Ny tranga iray hafa amin'ity karazana ity dia:
Ny Trangam-panjakan'ny Zandriny any Millard Fillmore | Alec Baldwin
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana amin'ny endriky ny endrika hita eo amin'i Joseph McCarthy sy Ted Cruz. Ankoatra izany, voamarika fa samy naneho ny fihazonana tanana toy izany izy ireo, indrindra ny nanondro ny fanondro ny fanondro. Ireo tranga hafa voalaza etsy ambony ihany koa dia mampiseho endrika mitovitovy amin'ny fiainana mandritra ny androm-piainany.
Innate Past Life Talent: Naneho fahaiza-manao politika i Joe McCarthy tamin'ny naha lasa Senatera avy any Wisconsin, izay naverin'i Ted Cruz lasa Senatera avy any Texas. Samy naneho ny fomba fijery mpandala ny nentin-drazana sy ny fiarahana amin'ny antoko Repoblikana. Samy naneho talenta hampiasa ny haino aman-jery izy roa hanatratrarana tanjona, toy ny tamin'ny ady an-tsokosoko an'i Joseph McCarthy nanohitra ny Kominisma sy ny hazofijalian'i Ted Cruz hanakanana an'i Obamacare.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Na dia tsy fantatro aza raha misy fifandraisana manokana misy eo amin'i Ted Cruz sy Paul Ryan, dia samy mpikambana ao amin'ny Kongresy amerikana sy ny Antoko Repoblikana. Araka izany, izy ireo tokony hanana fifandraisana vitsivitsy. Paul Ryan dia fantatra amin'ny maha-teraka ny vatana vaovao an'i Urban van Susteren, izay sakaizan'i Joseph McCarthy, mpanohana sy mpanolotsaina amin'ny fampielezan-kevitra.